१३ वर्षमै एकल बनेकि रीताकाे यस्तो छ दुःखद कहानी, एकपटक अवस्य पढ्नुहाेला! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > १३ वर्षमै एकल बनेकि रीताकाे यस्तो छ दुःखद कहानी, एकपटक अवस्य पढ्नुहाेला!
admin May 28, 2020 जीवनशैली, समाचार, समाज 0
उनीहरुले वैशाख १३ गते मानेभन्ज्याङ बजारबाट भागेर विवाह गरे।विवाह गर्दा सुनिल १७ र रीता १३ वर्षका थिए। सुनिल एसइईको परीक्षा दिएर बसेका थिए भने रीता कक्षा ८ मा पढ्दै थिइन्। उनीहरुले विवाह गरेको दुई दिनपछि मात्र रीताको घरमा थाहा भएको रीताकी आमा तिजमायाले बताइन्। ‘छोरी घर आइन, दुई दिनसम्म गाउँ, खोला, खोल्सा, जंगलतिर खोजियो, प्रहरीमा पनि जानकारी गरियो’, उनले भनिन्, ‘दुई दिनपछि आफन्तमार्फत छोरीले बिहे गरेर गएको थाहा भयो।’ रीताको उमेर कलिलै भएकाले छु,ट्ट्याउन खोजियो तर उनीहरुले आ,त्मह,त्या (दुर्घ,टना) गर्नेे डरले केही नगरिएको रीताका बुवा गमबहादुरले बताए।
घरमा कामको दुःख भए पनि सुनिल र उनको सम्बन्ध राम्रै थियो। गत असोज ३ गते सुनिल र उनीसँगै बारीमा घाँस काट्न गएका थिए। रीतालाई बारीमै छोडेर सुनिल घर फर्किए। घर आएर उनी बाली उठाउन गाउँ जानुपर्ने थियो। एक घन्टापछि रीता घाँस लिएर घर फर्किंदा उनीहरु सुत्ने कोठाको ढोकामा भित्रबाट चुकुल लगाइएको थियो। बाहिरबाट बोलाइन्, भित्रबाट आवाज आएन। ‘ढोकाको भित्रबाट चुकुल लागेको थियो, मैले बोलाएँ, कोही बोलेनन्’, उनले भनिन्, ‘तर झ्यालबाट जान सकिने थियो। गएर हेर्दा सुनिलले झु,न्डिएर आ,त्मह,त्या गरिसकेका रहेछन्।’
श्रीमान्को मृ,त्युपछि घरमा जम्मा भएकामध्ये उनलाई सहानुभूतिभन्दा पनि ‘कस्ती अलच्छिनी रहिछ ? यो उमेरमै श्रीमान् खाई’ भन्ने आरोपसमेत सहनु परेको उनले बताइन्। रिता र सुनिलको विवाह दर्ता भएको छैन। कानुनअनुसार उनीहरुको विवाह भएको देखिँदैन तर सामाजिक रूपमा उनीहरुको विवाह भइसकेको छ। कानुनअनुसार रीता एकल हाेइनन् तर सामाजिक रुपमा उनी १३ वर्षमै एकल भएकी छिन्। पतिको मृत्युपछि रीता माइत फर्केर कक्षा ८ मा पढ्न थालेकी छन्।
आफु ठुलै जा’तको हुँ, भन्दै नवराजले केटीलाई फ’साएको खु’लासा, बे’पत्ता गोबिन्दको आमा र यी युवकले खोले य’स्तो पोल (भिडियो)
तीव्र गतिमा रहेको स्कुटर एक्कासी ट्रकमा ठोक्किएपछि..